रविन्द्र मिश्र भन्नुहुन्छ : भ्रष्टा’चारले जीवन धान्नेले नै भ्र’ष्टाचारको वि’रोध गरिरहेका छन्…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
रविन्द्र मिश्र भन्नुहुन्छ : भ्रष्टा’चारले जीवन धान्नेले नै भ्र’ष्टाचारको वि’रोध गरिरहेका छन्…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौ ; भ्रष्टाचा’रले जीवन धान्नेले भ्रष्टा’चारको विरो’ध गरिरहेका भन्दै साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले दुख व्यक्त गरेका छन्। दिनदिनै ठग्नले आदर्शको भा’षण गरेको भन्दै उनले सधैं नराम्रो गर्नेले लाभ पाइरहेको र राम्रो गर्नेले एकाध गल्ती गर्दा दान’वीकरण गराइएको भन्दै पी’डा पोखेका छन्।
शुक्रबार दिउँसो एक ट्विट गर्दै मिश्रले ‘कस्तो समाज बनाउँदै छौं हामी भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्। साथै उनले यो सबैको समाधान केवल गुणस्त’रीय शिक्षा भएको लेखेका छन्।पछिल्ला दिन विकसित राजनीतिक घ’टनाक्रम र त्यसप्रति भइरहेको चर्चाप्रति मिश्रको भनाइ केन्द्रित छ।
भ्रष्टा’चारबाट जीवन धान्नेले भ्रष्टा’चारको ति’ब्र विरो’ध गर्ने। दिनदिनै ठग्नेले आदर्शको भा’षण गर्ने। सधैँ नराम्रो गर्नेले लाभ पाउने, सधैँ राम्रो गर्नेले एकाध गल्ती गर्दा दान’वीकृत हुनु पर्ने। कस्तो समाज बनाउँदै छौँ हामी? पहिलो समाधान- निशुल्करगु’णस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा!
निको हुनेको संख्यामा निरन्तर बृद्धि, पछिल्लो २४ घण्टामा ३५ सय २२ जनाद्वारा स्वास्थ्यलाभ !
काठमाडौं : कोरो’ना भा’इरस कोभिड १९ को संक्रम’णबाट पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ३ हजार ५ सय २२ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरबाट ३ हजार ५ सय २२ जना निको हुँदा डिस्चार्ज हुनेहरुको कुल संख्या ८८ हजार ४० पुगेको छ ।
त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितहरुको संख्या ३७ हजार ३ सय ८२ रहेको छ । यसैगरी क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या ४ हजार ८ सय ८ रहेको छ ।
यस्तै होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या २५ हजार ४६ रहेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा १२ हजार ३ सय ३६ जना छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर १६ हजार ५ सय ३१ जनाको पीसीआर परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल १२ लाख ५४ हजार १ सय ६७ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ ।
Prevसुनसरीका प्रहरी निरीक्षक खनाल उत्कृष्ट अनुसन्धानकर्ता…हेर्नुहोस् ।
Nextबुढीगण्डकी, एनसेल, वाइडबडीमा छानबिन गरौँ म तयार छु के तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ ? बाबुराम भट्टराई
प्रधानमन्त्री ओलि र प्रचण्ड बिच नजिक पुग्दै सहमति …हेर्नुहोस।
सत्ताका लागि ओलीसँग सहकार्य नहुने उपेन्द्र यादवको प्रस्टोक्ति
ओलीको अयोध्या तीरले मोदीको राजनीति ह’ल्लियो ! तर राम नेपाली भएको यथस्ट प्रमाण ! हेर्नुहोस भिडियो सहित